Rantsan-drivotra, Fijanonan'ny fampiatoana ny rivotra, Ringan'ny rivotra - Yiconton
Loka & mari-pahaizana
Cabin Seat Air Lohataona
Fiatoana amin'ny fampiatoana ny rivotra
Mpitsahatra fampiatoana ny rivotra
Rivotra fanidiana an'habakabaka
Yitao dia orinasa manokana amin'ny famokarana sy serivisy fanidiana ny rivotra.
FAMPISEHOANA NY FIVAVAHANA AIR SPRINGANA MORAORA FIVORIANA
Fandresena ny fisorohana sy ny fifehezana ny areti-mifindra COVID-19
Tamin'ny 2 febroary, Guangzhou Yitao Qianchao Vibration Control Technology Co., Ltd sy ny orinasa feno azy dia Guangdong Yiconton Airspring Co, Ltd. samy nanolotra CNY 100.000 hanohanana ny ady amin'ny coronavirus novonoina. Raha manome vola mavitrika dia mitaky ezaka hanakanana ny ...
Vaovao tsara! Guangdong Yiconton Airspring Co., Ltd. Nahazo tamim-pahombiazana ny fanamarinana ny Pusat Teknolojia Guangdong tamin'ny taona 2019
Tato ho ato, ny Departemantan'ny Siansa sy ny Teknolojia any Guangdong dia nanambara ny lisitry ny Ivotoerana Ivotoerana Ivotoerana sy ny Teknolojia Guangdong tamin'ny taona 2019. Guangdong Yiconton Airspring Co, Ltd. mpamatsy orinasa iray manontolo an'ny Guangzhou Yitao Qianchao Vibration Control Technology Co., Ltd, suksesfu ...
Ny filohan'i Yitao, Pang Xuedong, dia nilaza fa ny orinasa dia mandinika tsara ny COVID-19.
Vao haingana, mba hiadiana amin'ny COVID-19, Guangzhou Yitao Qianchao Vibration Control Technology Co, Ltd. nanambara ny orinasa mpiambina azy iray manontolo Guangdong Yiconton Airspring Co., Ltd. dia hanolotra Yuan 100 000 hafa, raha ity orinasa roa ity dia nanome 100.000 yuan isaky ny teo aloha. Mbola lavitra i Yitao dia nanome 300 ...
Guangdong Yiconton Airspring Co, Ltd., (Taorian'izany voalaza fa "Orinasa") dia orinasa iray feno an'i Guangzhou Yitao Qianchao Vibration Control Technology Co, Ltd, izay nahazo ny loka indostrian'ny famokarana ambony tao amin'ny vondrona orinasa mpamokatra. ao amin'ny faha-8 an'i Chine inovation sy Entre ...
Mankalazà am-pitiavana ny marika «mazoto» ny marika anaovanay ho marika malaza Guangdong amin'ny vokatra amin'ny lohataona otomotiko.
Araka ny fepetra takian'ny "Torozon'ny vokatra marika malaza amin'ny faritany Guanggong", "hazoto" amin'ireo vokatra izay iray amin'ny marika Guangzhou Yitao Qianchao Vibration Control Technology Co., Ltd., dia nomena anarana hoe "marika malaza amin'ny faritany Guangdong Province". by Guan ...
momba anay ny serivisy momba ny varotra no hifandraisanay amin'ny asa